R/wasaaraha Itoobiya oo Jeediyay Hadal Soomaali badan Feker & Walwal cusub galiyay – XAMAR POST
R/wasaaraha Itoobiya oo Jeediyay Hadal Soomaali badan Feker & Walwal cusub galiyay
By Mohamed Ahmed On Jun 4, 2018
Ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shalay sheegay in dalkiisa uu dhisanayo ciidamada badda iyo maraakiib dagaal, inkasta oo ay jirto in Ethiopia aysan lahayn wax bad ah, oo ciidamadaas ay ka howl­galaan.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa durba billaabay inay is­weydiiyaan sida dal aan bad lahayn uu ciidan bad ku yeelan karo.
Is­weydiin kaliya maahee, qaarkood ayaa billaabay inay ka wallaacaan hadalka Abiy Ahmed iyo saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliya.
Sanadihii dhowaa Ethiopia waxa ay si muuqata u maamuleysay maamul goboleedyada Soomaaliya, waxaana dadka qaar walaaciyey in qorshahoodu yahay in ay Soomaaliya kusii hayso marxaladdan ah maamulo badan oo is­garab ordaya, si ay taas uga faa’iideysato, una maamusho xeebaha Soomaaliya.
Waa wax laga dhursugayo, halka ay ciidamada badda Ethiopia ee la dhisayo ka howlgalaan, hase yeeshee Soomaalida xaq ayey u leeyihiin inay ka walaacaan qorshahan.
XOG: Maamulka Shirkada DP World oo Shaaciyay Sirta shaqada ka socota dekada Berbera